खाने होइन त सिंहसँग बसेर डिनर ? – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, असार २७, २०७५१८:०३0
सिंहसँग बसेर डिनर गर्न के सम्भव होला ? अथवा भालुसँग नुहाउन ? यी हिंस्रक जनावरको छेउमा पर्नु त जोखिमपूर्ण छ भने यिनीहरूसँग डिनर खाने अथवा नुहाउने कुरा असम्भव सुनिन्छ । तर, अस्ट्रेलियामा यस्तो सुविधा उपलब्ध छ ।
अस्ट्रेलियाको क्यानबेरास्थित नेसनल जु एन्ड एक्वेरियममा यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइएको हो । जु एन्ड एक्वेरियममा गत साता वाइल्डलाइफ लज स्थापना गरिएको छ, जहाँ ग्राहकहरूलाई यस्तो ‘खतरनाक’ सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।
लजलाई अनौठो तरिकाले देखाइएको छ, जहाँ पुग्ने ग्राहकलाई जानवरसँग रमाइलो गर्ने अवसर मिल्छ । तर, यी जनावरबाट ग्राहकलाई सुरक्षित राख्ने चाँजोपाँजो पनि मिलाइएको छ । यो लजमा १८ वटा कोठा छन् । सबै कोठामा सिसाको मोटो पर्खाल लगाइएको छ । पर्खालको एकतिर सिंह, भालु, जिराफ आदिलाई राखिएको छ ।
अर्कोतिर ग्राहकका लागि डाइनिङ टेबल र स्विमिङ पुलको व्यवस्था गरिएको छ । डाइनिङ टेबलमा खाना खाँदा र स्विमिङ पुलमा नुहाउँदा ग्राहकले जनावरहरूको बीचमा आफूलाई पाउँछन् । लजका मालिक रिचर्ड टिनडेलका अनुसार यी लोपोन्मुख जंगली जनावरको संरक्षणप्रति सचेतना जगाउने उद्देश्यले यस्तो लज खोलिएको बताए ।
जान्नुहोस् ! यस्तो हुन्छ सपनामा मन्दिर गएको देख्नुको खास अर्थ !